Vavaka hanoherana ny zaza tsy hita ao anaty nofy | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka hanoherana ny zaza tsy hita ao anaty nofinofy
Vavaka hanoherana ny zaza tsy hita ao anaty nofinofy
Isaia 8:18 Indro, izaho sy ny zaza nomen'i Jehovah ahy dia famantarana sy fahagagana eo amin'ny Isiraely avy amin'i Jehovah, Tompon'ny maro, Izay mitoetra any an-tendrombohitra Ziona.
Androany isika dia hijery vavaka hanoherana ny zaza tsy hita ao anaty nofy. Isaky ny mahita ny tenanao mitady zaza manokana ao anaty nofy ianao ary tsy mahita an'io zaza io mandra-mifoha anao dia tsy maintsy mifoha mivavaka ianao fa tsy nofinofy tsara izany. Ny zaza tsy hita ao anaty nofy dia midika hoe ny fanahin'ny fahafatesana dia mety ho tonga ho an'io zaza io. Rehefa manana nofy toy izany ianao dia aza matahotra, avelan'Andriamanitra hahita izany ianao mba hahafahanao mivavaka manohitra izany. Antsoy ilay zaza voakasik'izany ary mivavaha mandritra ny androm-piainany, manaova fanambarana momba ny fiainana eo amboniny ary hosory ilay zaza amin'ny anaran'i Jesosy.
Fantaro fa amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao dia manana fahefana hanafoana ny nofy ratsy ianao, Marka 11: 23-24 milaza amintsika fa hanana izay lazaintsika isika, raha tsy miahanahana isika. Noho izany dia lavo ny fanahin'ny fahafatesana ao amin'ny fianakavianao, sarony ny anao rehetra ankizy amin'ny ran'i Jesosy ary manambara ao ny fahafahana amin'ny fahafatesana. Ireo vavaka atao amin'ny zaza tsy hita ao anaty nofy dia hitarika anao amin'ny fandraisanao azy ireo. Mivavaha amin'ny finoana ary aza matahotra, handresy amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
1. Ny hery rehetra, miova ho masquerades amin'ny alina mba hanafika ahy amin'ny nofy, hiseho ary ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Ny fahefana rehetra, miova ho biby amin'ny alina mba hanafika ahy amin'ny nofy, miankohoka ary ho faty, amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Ny vatam-paty tsirairay, nomanin'ny mpitsara hamono ny aiko ho faty, dia handrehitra afo sy rooro ho lavenona, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ny lavaka tsirairay, nihady ho an'ny aiko tamin'ny alalàn'ny fahafatesana, nitelina ireo mpiasa, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Ny hery rehetra, mampahory ny fiainako amin'ny alàlan'ny nofinofiko ho faty, dia mianjera sy maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Ny hery mpamosavy rehetra, mampijaly ny aiko amin'ny fanahin'ny fahafatesana, mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ny hery mpamosavy rehetra, izay nomena ho an'ny fianakaviako ho an'ny fahafatesana tsy an-kanavaka, miparitaka sy maty amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ny mpiasam-panjakan'i satana rehetra, manara-maso ny fiainako ho an'ny ratsy, mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ny fanomezam-pahasoavana tsy mahafaty izay noraisiko, raiso ny afon'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ny mpanenjika mafy ny fiainako rehetra, mitodiha, mamono ao amin'ny Ranomasina Mena anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Ny zana-tsindrin'ny aretina rehetra, mivoaka avy amin'ny fiainako ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Ny hery rehetra, ny fampiharana ny aretim-po amin'ny fiainako, mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ny didim-pitsarana rehetra momba ny fahafatesana tsy an-kanavaka mitarika ny fiainako, mandrehitra afo sy ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Ny fifandraisana ratsy rehetra eo amiko sy ny fanahin'ny fahafatesana tsy an-kanavaka, dia esorina amin'ny ran'i Jesosy.
15. Manda aho ary mandà ny fiaraha-miasa rehetra amin'ny fanahin'ny fahafatesana, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Ny solomaso satana rehetra nolovako tamin'ny masoko, vaky ny ran'i Jesosy.
17. Ny fifanarahana razana rehetra amin'ny fanahin'ny fahafatesana tsy an-kanavaka, vaky amin'ny ran'i Jesosy.
18. Ny fanekena rehetra sy ny faneken'ny afon'ny afobe ao amin'ny fianakaviako, dia ho fonganan'ny ran'i Jesosy.
19. Ny fifanarahana rehetra amin'ny fanahin'ny fahafatesana ao amin'ny fianakaviako, vaky ny ran'i Jesosy.
20. Tsy ho faty aho fa ho velona. Ny isan'ny androko dia ho tanteraka, amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraFanambarana mivavaka mahery manohitra ny vokatry ny faharatsiana
Next lahatsoratraTsy maintsy maty ny vavakeliko Heroda
Vavaka hahazoana fanafahana amin'ny ota
Zava-bavaka 30 ho an'ny fanosorana ara-paminaniana